Global Voices teny Malagasy » Angola: Zara raha misy fanehoankevitra mikasika ireo varotra fitaovam-piadiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Angola: Zara raha misy fanehoankevitra mikasika ireo varotra fitaovam-piadiana
Voadika ny 11 Oktobra 2018 5:48 GMT 1	 · Mpanoratra Clara Onofre Nandika (fr) i Norbert Bousigue, imanoela fifaliana
Sokajy: Angola, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Tsaraina  ao Frantsa amin'ity volana Oktobra 2008 ity ilay raharahana fivarotana fitaovam-piadiana manala-baraka tamin'i Angola  [amin'ny teny anglisy]. Mahavoarohirohy olona ambony ao Frantsa sy Angoley lazaina ho manana fahefana izany, atomboka amin'ny Filoha José Eduardo dos Santos . Nanao izay ezaka farany vitany anefa  i Angola mba hisorohana ity fitsarana ity  [amin'ny teny anglisy], tamin'ny fiantsoana ny fanajàna ny ”lalàna amin'ny tsiambaratelo” -n'ny firenena vahiny.
Tantara politika ratsy nanomboka tamin'ny 1992 ity raharaha ity, matetika antsoina hoe ”Angolagate”, na raharaha Mitterrand-Pasqua, rehefa tonga saina tamin'ny fahambaniany ara-tafika manoloana ny UNITA  an'i Jonas Savimbi , izay tamin'izany fotoana izany dia nifehy ny 80% tamin'ny tany angoley i José Eduardo dos Santos. Mba hiatrehana izany toe-javatra izany, nanapa-kevitra ny ffiloha angoley ny hiala ireo sazin'ny ONU mandrara ny fivarotana fitaovam-piadiana ao Angola sy hividy fiara mifono vy miisa 400, balan-tafondro 150 000, vanja milevina miisa 100 000, helikoptera am-polony, sambo vitsivitsy fitondra miady ary fitaovam-piadiana maro hafa avy tao amin'ny Firaisana Sovietika taloha.
Notanterahin'ny vondronorinasa iray, miorina ao Parisy izay antoina hoe Brenco International ny fivarotana ireo fitaovam-piadiana ireo, mitentina 790 tapitrisa dolara. Ny mpitantana azy, i Pierre Falcone , sy ilay israeliana mpanao politika Arkadi Gaydamak , izay ankehitriny dia eo amin'ny dabilion'ny voampanga, no mpilalao fototra tamin'ity varotra ity. Ny fitambarany 40 hafa voampanga, izay frantsay tomponandraikitra ara-politika  malaza ny sasany [amin'ny teny anglisy] no tsaraina ary mety hahazo hatramin'ny 10 taona fidirana am-ponja.
Nanomboka tamin'ny Alatsinainy 6 oktobra 2008 ilay fitsarana ary tokony haharitra hatramin'ny 4 martsa 2009 ireo adihevitra. Tamin'ny fiandohan'ity fitsarana ity, tena vitsy ireo fanehoankevitra tao amin'ny tontolon'ny blaogy angoley, sy tany amin'ny fampahalalam-baovao.
Iray tamin'ireo blaogera vitsy an'isa sahy nanainga ilay lohahevitra, gaga i Robert Ivens, tao amin'ny blaogy Nos Cus de Judas  [amin'ny teny portiogey] fa tsy nisy angoley voampanga tao anatin'ity fitsarana ity :
Tena mahagaga ny tsy fisiana Angoley, na dia iray aza, voampanga tao anatin'ity fitsarana ity. Alao sary an-tsaina hoe ireo fitaovam-piadiana, fiara mivono vy, sambo, helikoptera, balan-tafondro, vanja milevina afaka nampidirina tao Angola nefa tsy nisy olona nanafatra na iray aza dia mamela hieritreritra fa mety ho… fanafihana avy any ivelany ve?!
Niampanga an'i Jean-Christophe Mitterrand ihany koa ny fitsarana frantsay, izay zanaky ny Filohan'ny Repobika frantsay tamin'izany fotoana izany, efa maty, ny manam-pahaizana ho an'ny faritra atsimon'i Afrika avy tao amin'ny Antoko sosialista frantsay i Jean-Bernard Curial, sy i Charles Pasqua , Minisitry ny Atitany frantsay taloha, ankoatra ireo hafa. Miverina amin'ity raharaha ity ihany koa ny blaogy Moçambique para Todos  [amin'ny teny portiogey] miaraka amin'ny lahatsoratr'ilay Angoley Eugénio Costa Almeida :
Ankehitriny, nanapa-kevitra ny hanomboka ity raharaham-pitsarana ity ny fitsarana frantsay, tsy miraharaha ny tombontsoa ambonin'ny Repoblika Frantsay, miaraka amin'ny fiampangana avy any amin'ny fivarotana an-tsokosoko fitaovam-piadiana, ka hatrany amin'ny fanararaotana ny fahatokiana, ny fanaovana hosoka hetra sy ny fampiasàna anaran'olona ambony. Izany rehetra izany noho ireo fiara mifono vy 420, balan-tafondro 150 000, vanja milevina 170 [arivo], helikoptera 12 ary sambo mpiady 6, novidian'i Angola tamin'ny fomba kisendrasendra, ary izay nandraisan'ireo mpanelanelana ”fanomezana” kelina dolara an'aliny vitsivitsy. Peanuts, toy ny mety holazain'ireo amerikana namantsika, toy ny tsy misy, angamba napetraka teo amin'ny kaonty maizimaizina anà orinasa, tany amin'ny tanàna frantsay, soisa na israeliana mialohan'ny hanohizany ny lalany mankany amina orinasa ara-bola napetraka any amin'ireo paradisan-ketra izay mbola ”hatorian”ny vola mandritra ny fotoana vitsy mialohan'ny hikorianany indray… satria midika fahafatesana ny fiatoana, ary tena feno fananana sy trano mirenty maro azo vidiana ao Eoropa.
Toy ny efa nampoizina, lavin'i Angolà fiamoangàna azy ho nandika lalàna rehetra sy ny fiampangana azy ho nanao varo-maizina ana fitaovam-piadiana ary fandosirana hetra, amin'ny fanamarinana fa ara-dalàna, tsy avy any frantsa ary tsy nandalo tao Frantsa ilay fitaovan'ny tafika. Rahnan'ny governemanta angoley hotafihana ireo tombontsoa ara-tsolik'i Frantsa ao Angola.
Tonga amin'ny fotoana ratsy ity fitsarana ity, raha toa ka niezaka ny hifanakaiky tamin'i Angola i Frantsa hatramin'ny fiandohan'ny taona, mampiseho izany ny fitsidihan'i Nicolas Sarkozy an'i Angola tamin'ny 23 Mey 2008.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/11/125131/
 raharahana fivarotana fitaovam-piadiana manala-baraka tamin'i Angola: http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_ventes_d%27armes_%C3%A0_l%27Angola
 Nanao izay ezaka farany vitany anefa: http://www.mg.co.za/article/2008-10-12-angola-tries-to-shield-leader-from-arms-case
 Pierre Falcone: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Falcone
 Arkadi Gaydamak: http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadi_Gaydamak
 frantsay tomponandraikitra ara-politika: http://www.france24.com/en/20081009-among-suspects-are-six-high-profile-figures-politicians-angolagate
 Charles Pasqua: http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Pasqua